अब सातामा ५३ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने, कुन देशमा कति ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > अब सातामा ५३ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने, कुन देशमा कति ?
अब सातामा ५३ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने, कुन देशमा कति ?
पोष्ट गरिएको असार. २६, २०७८ मा ३:३० मध्यान्ह असार २६, २०७८
प्रकाशित : 1:47 pm, शनिबार, असार २६, २०७८
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय नियमित उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । हालै भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय उडान सङ्ख्या थप गरी नयाँ तालिका नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई पठाएको छ ।
क्यानका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीका अनुसार अब सातामा कुल ५३ वटा उडान सञ्चालन गर्नेगरी विभिन्न मुलुकका गन्तव्यमा उडान तालिका तय गरिएको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ उडान सङ्ख्या थप गर्दै यसअघि उडान खुला गरेका गन्तब्यमा भारतबाहेकका मुलुकमा हुने उडान सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
कुन देशमा कति उडान ?
नयाँ तालिकाअनुसार भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सातामा दुई उडान सम्बन्धित मुलुकका राष्ट्रिय ध्वजाबाहकले गर्नेछन् । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले बुधबार र एयर इण्डियाले सोमबार गर्नेछन् ।
यस्तै नेपाल एयरलाइन्सले यूएईको दुबईमा मङ्गलबार र बिहीबार तथा नेपालबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्ने निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार उडान भर्नेछन् । फ्लाइ दुबइले आइतबार, बुधबार र शुक्रबार एक/एक उडान गर्नेछ ।
.क्यानको उडान तालिका अनुसार कतारको दोहामा नेपाल एयरलाइन्स र कतार एयरवेजले हरेक दिन उडान गर्नेछन् भने हिमालय एयरलाइन्सलाई साताको सोमबार, बुधबार र शनिबार उडान अनुमति दिइएको छ । उक्त एयरलाइन्सले साउदी अरेबियाको दमाममा साताको चार दिन आइतबार, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान गर्नेछ ।
नेपाल एयरलाइन्सले मलेसियाको क्वालालाम्पुरमा बुधबार र शनिबार सातामा दुई उडान पाएको छ । त्यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार क्वालालाम्पुर उडानको अनुमति पाएको छ । टर्किस एयरलाइन्सले टर्कीको इस्तानवुलमा सोमबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्नेछ ।
जजिरा एयरवेजले कुवेतमा साताको ५ दिन सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार र शनिबार उडान गर्नेछ । सलाम एयरले ओमानको मस्कटमा सातामा तीन दिन सोमबार, बुधबार र
चाणक्य पोष्ट असार २६, २०७८
२ महिनापछि सुकेटार विमानस्थलमा जहाज अवतरण
२८ वर्षदेखि उपाधि विहिन अर्जेन्टिनामा मेस्सीलाई परिचय बदल्ने मौका
यी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, कस्तो रहन्छ आगामी तीनदिन ?
कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन अनलाइन दर्ता नम्बर अनिवार्य, कसरी भर्ने फारम ?